हार हार निकै लचिलो छ र महिलाको घाँटी क्षेत्रमा सुन्दर ढ cas्गले कास्केड गर्न एक साथ निर्बाध रूपमा बेच्ने विभिन्न टुक्राहरूबाट बनाइएको हो। दायाँपट्टि बीचको फूलहरू घुमाउँछन् र त्यहाँ हारको बायाँ छोटो टुक्रालाई ब्रुचको रूपमा अलग प्रयोग गर्न भत्ता हुन्छ नेकलेस अत्यन्तै हल्का छ जुन थ्रीडी आकार र टुक्राको जटिलतालाई दिइएको छ। यसको लागि कूल वजन 36 36२. grams० ग्राम बनेको छ १ k क्यारेटको, 8१8.7575 क्यारेट ढु stone्गा र हीराको साथ।
रेशम फाउलार्ड "जोश" एक "सन्दर्भ" वस्तु हो। राम्ररी रेशम स्कार्फलाई पकेट वर्गमा मोड्नुहोस् वा यसलाई कलाकृतिको रूपमा फ्रेम गर्नुहोस् र यसलाई जीवनभरि बनाउनुहोस्। यो खेल जस्तो छ - हरेक वस्तुसँग एक भन्दा बढी प्रकार्यहरू हुन्छन्। "आदर" पुरानो शिल्प र आधुनिक डिजाइन वस्तुहरु को बिच कोमल सम्बन्ध। प्रत्येक डिजाइन कला को अनुपम टुक्रा हो र एक फरक कहानी भन्छ। ठाउँको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ प्रत्येक सानो विवरणले कथा भन्छ, जहाँ गुणस्तर जीवनको मूल्य हो, र सबैभन्दा ठूलो विलासिता आफैंमा सत्य भइरहेको छ। यो जहाँ हो "आदर" भेट्छु। कला तपाइँलाई भेटौं र तपाइँ संग बूढो हुनुहोस्!
गहना संग्रह गहना प्रोजेक्ट फ्यूचर ०२ एक रत्न संग्रह हो जुन सर्कल प्रमेयहरूबाट प्रेरित रमाइलो र जीवन्त मोड़ हो। प्रत्येक टुक्रा कम्प्युटर एडेड डिजाइन सफ्टवेयरको साथ सिर्जना हुन्छ, पूर्ण वा आंशिक रूपमा सिलेक्टिभ लेजर सिन्ट्रि or वा स्टिल थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीको साथ र हातले पारंपरिक सिल्वरस्मिथिंग प्रविधिहरूको साथ समाप्त हुन्छ। संग्रह सर्कल को आकार बाट प्रेरणा आकर्षित गर्दछ र सावधानीपूर्वक Euclidean प्रमेयहरु ढाँचा र पहनने योग्य कला को रूपहरु मा कल्पना गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ, प्रतीकात्मक रूप, यस तरिका मा एक नयाँ शुरुआत; रोमाञ्चक भविष्यको लागि सुरूवात बिन्दु।
खाई कोट प्रेम र बहुमुखी प्रतिभा। स beautiful्ग्रहको अन्य सबै कपडाहरूसँगै यस ट्रान्चकोटको कपडा, टेलरिंग र अवधारणामा छापिएको एउटा सुन्दर कथा। यस टुक्राको विशिष्टता निश्चित शहरी डिजाइन, न्यूनतम स्पर्शको लागि हो, तर वास्तवमा यहाँ आश्चर्यजनक कुरा के हो भने, यो यसको बहुमुखीपन हुन सक्छ। कृपया आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्, कृपया। सर्वप्रथम, तपाईले एक गम्भीर व्यक्ति देख्नु पर्छ जो उनको गम्भीर..ब्लू काममा जाँदै छ। अब, तपाईको टाउको हल्लाउनुहोस्, र तपाईको अगाडि तपाईले लिखित निलो ट्रेंच कोट देख्नुहुनेछ, त्यसमा केही 'चुम्बकीय विचारहरू सहित। एक हातले लिखित। प्रेम संग, Reprobable!
फोल्डिंग आईवेयर सोनजाको नेत्रवस्तु डिजाइन फूलेका फूलहरू र प्रारम्भिक तस्बिर फ्रेमहरू द्वारा प्रेरित गरिएको थियो। प्रकृतिको जैविक रूप र दर्शक फ्रेमका कार्यात्मक तत्त्वहरूको संयोजनका साथ डिजाइनरले एक कन्भर्टेबल वस्तुको विकास गर्‍यो जुन सजिलैसँग धेरै फरक देखिने गरी चलाउन सकिन्छ। उत्पाद पनि एक व्यावहारिक तह संभावना संग डिजाइन गरिएको थियो, क्यारियर ब्यागमा सकेसम्म थोरै स्थान लिएर। लेन्सहरू अर्किड फूल प्रिन्टहरूको साथ लेजर-कट प्लेक्सिग्लासको उत्पादन गरिन्छ, र फ्रेमहरू म्यानुअल रूपमा १ goldk सुनको प्लेट गरिएको ब्रास प्रयोग गरी बनाइन्छ।
मल्टीफंक्शनल इयररिंग डेजीको समग्र फूलहरू हुन् जसलाई दुईवटा फूलहरू मिलेर राखिन्छ, एउटा भित्री भाग र बाहिरी पंखुला खण्ड। यसले दुई जनाको साँचो प्रेम वा अन्तिम बन्धनको मिलन गराउने प्रतीक हो। डिजाईनले डेजी फूलको विशिष्टतामा मिसाइन्छ, जसले पहिरनेलाई ब्लू डेजी लगाउन बहुविध तरीकाले अनुमति दिन्छ। पंखुडीहरूका लागि निलो नीलमणि छनौटको आशा, चाहना र प्रेमको लागि प्रेरणा जोड हो। केन्द्रीय फूलको पंखुडीको लागि छानिएको पहेंलो नीलमणि पहननेलाई खुशी र गर्वको भावना महसुस गर्न लगाउँदछ ताकि यसले परिपूर्णता प्रदर्शन गर्नमा पूर्ण प्रसन्नता र आत्मविश्वास दिन्छ।
The Curtain बिक्री कार्यालय शुक्रबार २३ जुलाई
Stocker कुर्सी बिहीबार २२ जुलाई
Reflexio टाइपोग्राफी परियोजना बुधबार २१ जुलाई
हार रेशम फाउलार्ड गहना संग्रह गहना खाई कोट फोल्डिंग आईवेयर मल्टीफंक्शनल इयररिंग